Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda, Safiirada Kenya iyo Itoobiya oo booqday goobtii burburka diyaaradda - Jowhar Somali Leader
Home Somali Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda, Safiirada Kenya iyo Itoobiya oo booqday goobtii burburka...
Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda, Safiirada Kenya iyo Itoobiya oo booqday goobtii burburka diyaaradda
Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Salaad Oomaar, Wasiirka Gaadiidka ee Koofur Galbeed, Safiirada Itoobiya iyo Kenya ayaa maanta booqday goobtii ay ku burburtay diyaaraddii African Express.
Diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ayaa Mas’uuliyiintan ka qaaday Muqdisho, iyagoo noqday Mas’uuliyiintii u horreeyay ee taga goobta diyaaradda ku burburtay.
Mas’uuliyiintan ayaa ka qeyb qaadanaya baaritaanka shilkii diyaaraddii African Express lagu soo riday, sidoo kale waxay la kulmayaan Saraakiisha Ciidamada Itoobiya iyo maamulka deegaanka, si ay uga wareystaan qaabkii shilka u dhacay.
Saraakiil ka tirsan Maamulka Koofur Galbeed ayaa laga soo xigtay in diyaaradda African uu haleelay gantaal ay rideen Ciidamada Itoobiya, xilli ay ku guda jireen tababar dabrid ah.
Illaa Lix ruux oo labo Kenyan ah iyo afar Soomaali ayaa ku dhintay shilka diyaaradeed, waxaana diyaaradda ay siday agab caafimaad loogu tala galay COVID-19.
Dowladda Kenya ayaa ka dalbatay dowladda Soomaaliya baaritaan dhab ah oo lagu sameeyo diyaaraddii la soo riday, waxaana Madaxweyne Farmaajo oo taleefanka kula hadlay Uhuru Kenyatta uu ku casuumay Hey’adda Saadaasha Hawada Kenya inay qeyb ka noqoto baaritaanka.
Wasiirka Amniga Galmudug oo bilaabay qorshihii u horeeyay dib u soo celinta goobaha danta guud
Mas’uuliyiin kormeeray goobtii lagu laayay dhalinyaradii caafimaadka iyo baaritaano bilowday